China Staniless Steel Parts factory na-emepụta | Ebute ụzọ
Ọ bụrụ na ị nwere akụkụ igwe anaghị agba nchara, anyị bụ otu n'ime isi mmalite na ọnụ ala. Uru: mfe ịgbado ọkụ, ezigbo plasticity (adịghị mfe imebi), deformation, ezigbo nkwụsi ike (adịghị mfe nchara), mfe passivation.
Ọ bụrụ na ị nwere igwe anaghị agba nchara ejiri anyị bụrụ otu n'ime ike na ọnụ ala.
Kedu ụdị igwe anaghị agba nchara?
Igwe anaghị agba nchara Austenitic: akara akara ngosi 200 na 300. Ya microstructure bụ austenite. Typesdị ndị a na-ahụkarị bụ ndị a:
Uru: mfe ịgbado ọkụ, ezigbo plasticity (adịghị mfe imebi), deformation, ezigbo nkwụsi ike (adịghị mfe nchara), mfe passivation.
Ọghọm: ọkachasị nke na-ajụkarị azịza nke nwere chloride, nke nwere ike ibute nrụgide nrụgide.
Igwe anaghị agba nchara: akara akara 400. Igwe microstructure ya dị n'ime ya dị ọcha, ọnụọgụ nke chromium dịkwa nso na 11.5% ~ 32.0%.
Typesdị ndị a na-ahụkarị bụ ndị a:
Uru: akwa ọdịnaya chromium, ezigbo nrụpụta ọkụ, nkwụsi ike ka mma, ikpo ọkụ ọkụ dị mma.
Ọghọm: adịghị mma n'ibu Njirimara na usoro arụmọrụ.
Igwe anaghị agba nchara Martensitic: akara akara 400. Ya microstructure bụ martensite. Onu ogugu nke chromium na udiri igwe a bu 11.5% ~ 18.0%.
Uru: elu carbon ọdịnaya, nnukwu ekweghị ekwe.
Ọghọm: adịghị mma plasticity na weldability.
Gịnị Ngwa Do igwe anaghị agba nchara tumadi Ji?
A na-ejikarị akụkụ igwe anaghị agba nchara: arịa, aka, akụkụ mmiri, akụkụ engine, arịa nri, ngwaọrụ ọgwụ, ngwa ụlọ ọgwụ, akụrụngwa akụrụngwa, tankị nrụgide, ngwa ngwa, akụkụ ụgbọ ala, tankị nrụgide, ngwa ngwa na akụkụ ụlọ.
Machining àgwà akụkụ si 304 igwe anaghị agba nchara. Anyị nwere ike igwe akụkụ dị mgbagwoju anya na igwe CNC Switzerland anyị yana CNC tụgharịa.
Igwe anaghị agba nchara alloy 304 bụ kemgwucha ewu ewu ala-na-eri alloy, ezigbo maka akụkụ na-achọ akpụ ma ọ bụ ịgbado ọkụ. Ọ nwere ezigbo njedebe, oxidation, na nguzogide okpomọkụ ma bụrụ nke kachasị weldable nke igwe nchara ọ bụla. 304 adịghị magnetik.
304 nwere machining eri akpata 5.0 mgbe tụnyere ígwè 12L14. Ọ dị mma maka ịgbado ọkụ ma na-arụpụta welds siri ike na ductile welds. 304 anaghị anabata ọgwụgwọ ọkụ, mana enwere ike oyi na-arụ ọrụ iji mee ka ike na ike sie ike. A na-atụ aro mkpuchi mkpuchi mgbe arụ ọrụ na oyi na-arụ ọrụ.
Rieslọ ọrụ & Ngwa
Mkpọchi na akụ
Ihe ndị dị na mbara igwe
Wuxi Lead nkenke Machinery arụpụta akụkụ igwe anaghị agba nchara site na iji ọtụtụ usoro dị iche iche: igwe, egwe ọka, mbịne, mkpọpu ala, ịchacha laser, EDM, zọta, mpempe akwụkwọ, mgbatị, ibe ya, wdg.
Nke gara aga: Akụkụ Brass
Osote: Akụ Aluminium